त्रियुगा नगरपालिकाको पछिल्लो मतपरिणाम सार्वजनिक, कसले कति मत ल्याए ? - अन्नपूर्ण टाइम्स
त्रियुगा नगरपालिकाको पछिल्लो मतपरिणाम सार्वजनिक, कसले कति मत ल्याए ?
१६ जेष्ठ २०७९ सोमबार १४:४२
गाईघाट त्रियुगा नगरपालिकाको पछिल्लो मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो मत परिणाम अनुसार बसन्त बस्नेतको जित सुनिश्चित भएको छ । गणना गर्न बाँबी छँदै कांग्रेसका बस्नेतको जित सुनिस्चित भएको हो ।
हाल सम्म गणना भएको ३९ हजार १ सय ७४ मत मध्ये बसन्त बस्नेतले १३ हजार ५ सय ७८ मत पाएका छन् । उनका निकटम प्रतिद्धन्द्धी एमालेका भागवत राउतले ११ हजार ५ सय८ मत पाएका छन् ।
यस्तै उपमेयरमा नेकपा एमालेकी महेश्वरी राईको जित निश्चित भएको छ । उपमेयरको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार एमालेका राईले १३ हजार २ सय ३० मत पाएकी छिन् भने नेपाली काग्रेसकी सरिताले ११ हजार ६ सय ९५ मत पाएकी छिन् ।
बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको अन्तिम परिणाम लगभग आइसकेको छ । बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा मतदान हुन बाँकी छ भने उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा मतगणना जारी छ ।
करिब वर्ष दिनअघि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा आएको फुटपछि बनेको पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि सहकार्यका साथ गएको तथा संसद्को ठूलो दल नेकपा ९एमाले०ले एक्लै निर्वाचन जित्ने जिकिरका बीच सम्पन्न निर्वाचन परिणाम बढी चर्चित बन्यो ।